Dawladda Djibouti oo ka hadashay muddaharaadyadii jimcihii - BBC News Somali
20 Febraayo 2011
Image caption Jamhuuriyadda Djibout
Xeer-ilaaliyaha Qaranka, Jama Suleiman, waxa uu faahfaain ka bixiyey khasaaraha muddaharaadyadii Djibouti ay geysteen, kuwaasi oo dhacay maalintii Jimcihii ee bishan 18-dii.
Waxanu sheegay inay jiraan askar bileys ah oo ku dhaawacmay muddaharaadyadaasi, mid ka mid ahina uu il daran yahay. Laakiin waxa uu intaasi ku daray in dad badan oo shicib ah dhibaatooyin soo gaadheen, kuwaasi oo uu ku eedeeyey in mucaaradku waxyeelleeyeen. "Mucaaradku waxay hayseen ruqsad sharci ah inay qabsan karaan mudaharaadyo nabadeed, laakiin waxay ka dhigeen qaar rabshadeed oo wax qasa", ayuu yidhi xeer-ilaaliyuhu
Xeer-ilaaliyuhu waxa uu intaasi ku daray khasaare badan oo dhinaca hantida ah, oo ka kooban xafiisyo dawladeed, baabuur iyo hanti dadweyne, iyo in la xidhxidhay ilaa 10 qof oo loo haysto rabshadaasi inay ku kaceen.
Hadda ka hor, dadka la xidhay waxa ka mid ahaa laba hooggaamiye oo ka tirsan axsaabta mucaaradka, oo uu ku jro Adan Roble Cawaale, hase aaatee la sii daayey isla shalayba. Xubnaaasi waxay dawladda ku eedeeyeen inay iyadu mas'uul ka tahay wixii dhimasho iyo dhaawac ahaa ee yimid, iyo inay isla markaasi sii wadi doonaan muddaaharaadyada.
Dawladda Djibouti waxay iyana maanta soo saartay digniin, waxayna sheegtay in dawladdu mas'uul ka tahay nabadgelyada iyo deganaansha. siina adkaynayso. Iyo in isla markaasi ay ka hortegi doonto ciddii wax u dhimasa xassilloonida dalka.